Labo kithi abanamalungelo ungumnikazi ujabule bezwe, ngokuvamile afuna izitshalo ezithakazelisayo futhi ewusizo, okungase kuhlale phezu ezweni labo. Thina uzokutshela mayelana owodwa nje onjalo. Kuyinto linesizotha futhi nice, kodwa into esemqoka - kuba Yiqiniso, izimfanelo zawo ezuzisayo. Igama zalesi sitshalo - dzhusay. Yini-ke, lapho likhula njengoba lisetshenziswe ukupheka, kodwa futhi mayelana nendlela ikhule dzhusay ngezwe lakini indawo, futhi sizobe ukukhuluma namuhla.
Iningi izitshalo kutshalwa uvele hhayi ngaphandle kokuqondiswa umuntu. Kodwa dzhusay kuyinto ngaphandle ephelele, ngoba likhula futhi isetshenziswa, injalo zemvelo yasekuqaleni. Plant ukumelana ezibandayo, hhayi afune izinto ngenkani kwabanye emhlabeni futhi ukunakekelwa okukhethekile, futhi izinambuzane nezifo ukuyibalekela dzhusay. Kuyini lokhu? Ngo abantu ibizwa ngokuthi ngezindlela ezahlukene: zasendle onion, isiShayina, onion amnandi noma branched, ngezinye izikhathi ibizwa ngokuthi insimu kumbe intaba garlic noma onion nje garlic. Kuyinkolelo eyamukelwa abaningi zisatshalaliswe ngazo zonke izingxenye zomhlaba, futhi ngezinye izikhathi ikhula ilungelo ngaphansi kwezinyawo zakho, emadlelweni, izimfunda kanye ematsheni.
dzhusay ngokuvamile etshalwe njengoba esimila Ornamental, kubukeka ihlanzekile futhi amahlamvu mncane kukhona ngamandla te umbala enhle. ukunakekelwa isitshalo kudinga cishe akukho. Kufanele kuphela ngezikhathi ezithile waphuzisa wanquma izikhathi eziningana ngonyaka dzhusay got a, amahlamvu abasha fresh. Kodwa ukuvela kwazo hhayi kuphela dzhusay ezikhangayo izakhiwo ewusizo anyanisi zasendle akuzona eliphansi kuya kumakhophi alo ezifuywayo.
Herbaceous zisetshenziswa Allium odorum noma dzhusay siphathelene umndeni ka-anyanisi. Khona kanye ukubukeka kwawo, amaqabunga ayo zifane garlic kanye ongafinyelela ubude kuze kube yingxenye imitha. imibala yabo isukela ukukhanya aluhlaza, futhi ushiya ngokwabo babe yokuqhuma ababuthakathaka. Uhlelo impande - pseudobulb. Minyaka yonke isitshalo ukhiqiza ezingasho ama abasha, ezikhulayo imindeni emikhulu. Izimbali kwenzeka ekupheleni July. Dzhusay Ufaka zezimbali sifanamsindvo, ebekiwe umqhele izambulela ibhola emise yenziwa ngezimbali encane emhlophe nge flavour obucayi elimnandi.
Yeka ukuthi luhlobo luni izici ezibaluleke has dzhusay ukuthi kuyini, nokuthi ukuyisebenzisa? Esikhathini ukudla esetshenziswa okuwukuphela kwesizathu ingxenye izitshalo - utshani futhi Imicibisholo inflorescences. Ayabudla kanti iphunga okusikhumbuza garlic. Kodwa u-anyanisi ube azisetshenziswa ukunambitheka nje olubonakalayo ukudla, yize ngezinye izikhathi balungiselela isithako nomuthi kwezokwelapha. anyanisi Wild amaningi ecebile kavithamini C, ngakho kakhulu wusizo imikhuhlane noma amasosha omzimba ebuthaka. It has amavithamini B1, B2, B5 kanye B6, K, E-beta-carotene. anyanisi Elimnandi abacebile potassium, i-calcium, okusansimbi kanye sodium, iqukethe ushukela amafutha abalulekile.
a okunjalo mkhiqizo ewusizo ngoba abantu abanezinkinga senhliziyo, ne amasosha omzimba esincishisiwe, izifo zemigudu yokuphefumula, inyumoniya, ukucinana kwemigudu yokuphefumula, isifo sofuba kolwelwesi, ukukhathala okusezingeni eliphezulu neziyaluyalu esithinta izinzwa, isetshenziswa nokuvinjelwa helminth. Lesi sitshalo anezakhi hemostatic, uba isisu futhi cholagogue. Cishe ngamunye wethu kuyoba usizo ukuze afake ekudleni onion yakho dzhusay. Photo lidlulisela kahle ubuhle naleli nxusa zomhlaba oluhlaza. umusa okunjalo iyiphi engadini noma utshani, futhi ngisho ingasetshenziswa ekulungiseleleni cishe kunoma iyiphi cuisine.
Ngayiphi izitsha ungakwazi ukwengeza dzhusay elimnandi, kuyini na? Asiqale neqiniso ukuthi okungenani zasendle, kodwa umnsalo. Ngenxa ngokuyisisekelo isetshenziswa ngendlela efanayo ajwayelekile kithi amalikhi oluhlaza. Kungaba ukungezwa salads izifundo zokuqala, side izitsha ukupheka, engeza inyama kanye nenhlanzi izitsha. U-anyanisi Kwelinye entwasahlobo kuqala. Yena, kanye garlic zasendle, basize ekugcwaliseni Vitamin izimpahla ngemva kobusika nokhahlo. onion Chinese muhle ezikhaleni for ophaya, nososo, kungaba marinate, engeza kuya imifino ekulondolozweni, kodwa ungakwazi nje kwi freezer ebusika. zasendle onion inflorescences asetshenziselwa infusions, liqueurs, futhi ku kulungiselelwa iwayini ezenziwe ekhaya.
Ukulima futhi Ukunakekela
Lesi simila - ukutshala zisetshenziswa ngoba esisodwa, uthola kweminyaka embalwa dzhusay eqinile, enhle futhi ewusizo. Ukutshala nokunakekela lincishisiwe. Akafuni lifuna ukukhanyisa noma inhlabathi, akesabi kubanda. Kodwa kufanele wazi ukuthi dzhusay alifanani nelive lapho ekhula iklabishi noma amazambane. Shintsha indawo kokwehla, kanjalo ubuyekeza ipulazi onion, udinga akukho ngaphambili kuka iminyaka 5. Ngokuvamile, anakekele lula ngisho kuka, isibonelo, ne garlic evamile noma u-anyanisi. Kufanele kube isikhathi sokutshala entwasahlobo, ngezikhathi bazithela wanquma amahlamvu. Dzhusay efudumele ebusika, futhi, akudingekile. Kukhona esinye isici nice kule oluhlaza - ke abadlula isikhunta nezinye izifo, ngisho ngesibhamu onion akayena ukunambitheka yakho.
Kusukela ihlumela lokuqala entwasahlobo kuze kwekwindla anyanisi zasendle uze uthele - amahlamvu fresh futhi zibe nephunga elimnandi. Kufanele libe njalo ukusika futhi ngezinye izikhathi mncane out embhedeni imbali ke lesi sitshalo ziyojabula unyaka wonke, amahlamvu abasha amnandi. Ukuze isizini ukuchitha 3-4 cuttings, zinyanga ngo-August, ngaphambi anyanisi abandayo amnandi kufanele abe nesikhathi ukuba sithole amandla. Luphinde ewusizo emva inqubo ngamunye onjalo kancane zalisa inhlabathi futhi, yebo, ukunikeza ukuthambisa luningi. Ngonyaka wokuqala wokuphila Juice akudingekile ukuba afeze izihlahla kusayithi lakho, ake it kahle luyokhula futhi sithole amandla.
Ukuze ube isitshalo enjalo kusayithi silula, udinga imbewu noma ama. Bobabili bakwazi ukuthenga noma ukuqoqa ngesikhathi, uma bakwazi ukuhlangana dzhusay zasendle. Indlela ikhule ngezindlela ezimbili Ngitshele kabanzi.
imbewu ayihlwanyelayo kudingeka kube entwasahlobo, lapho phansi efudumele ngokwanele. esifundeni ngasinye sihlukile, kodwa ngokuvamile ukufika kuyinto ngoMashi noma Apreli. Ngaphambi kokuqala umsebenzi imbewu engcono cwilisa usuku noma ngisho ebusuku. achenes evuvukele asuswe amanzi, ngomusa obsushivayut bese uqale zokutshala.
Ukujula elikhulu ukuhluma kwezinhlobo 1-2 cm, ngokuvamile dzhusay ukubeka ryadochkami, kusale phakathi kwabo ibanga 30-40 cm. Ukuze wenze lokhu, udinga ukwenza ezweni inkatho futhi ukuhlwanyela imbewu, kodwa hhayi obukhulu khulu. Ungenza kokwehla indlela yokwakha isidleke. Ngezinye ibanga ngamasentimitha ambalwa kusuka komunye nomunye, ukwenza izimbobo ezincane emhlabathini ngomunwe wakho futhi cwilisa in zonke imbewu embalwa, amboze phansi.
Dzhusay izalana kahle ama abe namandla uhlelo impande. Uzodinga umbe ziningi onion amnandi zihlukanise anyanisi, ngesikhathi esifanayo uzame ukukhetha enamandla kakhulu, evuthiwe. Lungisa umbhede: udinga athambise umhlabathi, bese wenza umgodi engajulile abese etshala sezihlahla. Ngesikhathi esifanayo, zama ukungazivezi bangcwabe isitshalo kakhulu, ezingeni phansi kufanele kube okufanayo njengoba okokugcina. Cindezela phansi kancane izitshalo emhlabeni aqine. Leli zwe kuba kuhle kucitsa entwasahlobo nasehlobo, kodwa ekwindla dzhusay kangcono hhayi kabusha. Onion angase angabi naso isikhathi sokupheka ukumila kahle futhi ukhule uqine, kodwa ngoba ebusika kuyoba ebulalayo kuye.
Dzhusay uzoqala eziqhakaza emva kweminyaka emibili futhi unike isivuno esihle. Lokhu sitshalo esimangalisayo ziyojabula oluhlaza aluhlaza nje kuphela, kodwa futhi kuyoba umhlobiso olukhulu izitsha zakho ozithandayo.
Indlela ukutshala unyaka futhi ukuhlobisa ingadi zabo
Isicelo lodonga ketshezi ngezandla zakho siqu
Isifo sika-Hansen. Uchoko (isifo sika-Hansen): Izimpawu, Ukwelashwa
Carpaccio: kuyini nokuthi ukupheka?
I-smartphone ye-Sony Xperia M2 Aqua: isibuyekezo, imininingwane, ukubuyekezwa
Indlela ukususa search Webalta yesistimu? Ukufundiswa Wabasaqalayo
Boxer Boyko Yury: Biography, empilweni yakho, futhi kuvelaphi ukulwa ngokuwina
Inhlangano ka epulazini sikhule Oyster On Base substrate Machines Bheka-8
Umkhankaso Persian kaPetru 1 (1722-1723). Russian-Persian impi